*Ikhabhinethi yelizwe eyodwa *1BR Imizuzu engama-20 ukusuka eTyeya! - I-Airbnb
*Ikhabhinethi yelizwe eyodwa *1BR Imizuzu engama-20 ukusuka eTyeya!
Hayi abamelwane! Ayisiyondawo enkulu okanye entle kodwa icocekile, ilula, kwaye iyaphumla. Iinkwenkwezi zikhanya kakhulu kwilizwe xa zinandipha umgodi womlilo. Ikhabhinethi yethu enamabali amabini ine-1BR eneebhedi ezimbini eziphindwe kabini, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ii-recliners, kunye negrill. Ilungele izibini, abahlobo, okanye iintsapho ezincinci.
I-Ark Encounter, i-Kentucky Horse Park, i-Keeneland, kunye ne-distilleries ezininzi zonke zingaphakathi kweyure ye-cabin. Le yindawo entle yokuphumla phakathi kotyelelo kule mitsalane.
Ikhabhinethi ibe yindawo esidibana kuyo nosapho kunye nabahlobo bethu! Sichithe ixesha elininzi malunga nomlilo wenkampu kwaye sola ngaphandle ngokutya okumnandi. Sidla ngokuvula iingcango zangaphambili ezimbini kwikhabhathi, sidlale umculo kwaye sonwabele iingokuhlwa emlilweni.
Ngaphandle, ujikelezwe ngamaplanga anomlambo omncinci ngasekhohlo kumnyango osemazantsi enduli. Nceda ungabangeli kude kakhulu kwindlwana njengoko imida yepropathi esemantla nasempuma iphakathi kwamakhulu ambalwa eeyadi. Iinkuni ezigciniweyo kunye nomgodi womlilo zezona ndawo ndizithandayo kule ndawo. Ngetafile yepiknikhi, iibhentshi, kunye nesifudumezi sepropane sangaphandle, uqinisekile ukuba uyonwabela ubusuku obunoxolo obukhanyiswe yinkwenkwezi malunga nomlilo. Ngaphandle kwezixeko zobukhulu phakathi kweekhilomitha ezingama-20, iinkwenkwezi zikhanya kakhulu ngobusuku obucacileyo.
Phezulu ligumbi elinye lokulala elineebhedi ezimbini. Yinto ekhululekile kunye 2-4 abahlobo okanye usapho. Ungalala iifestile zivuliwe, okanye usebenzise i-air conditioner phezulu xa kuyimfuneko. Isifudumezi sombane sikwakhona xa izinto zibanda. Umatrasi womoya ongukumkanikazi kunye nabantwana abapakishe n play zigcinwa ngasemva kwesiporo xa uzifunela abantu abongezelelweyo. Umatrasi womoya unokuthatha indawo enkulu yegumbi lokuhlala ezantsi ukuba uyafuneka kodwa uza luncedo kwipinki.
Ikhitshi linesitovu, imicrowave, ifriji enesikhenkcezisi, umenzi womkhenkce ozimele wodwa, itoaster, umenzi wekofu kunye nesinki ephindwe kabini. Sinazo iimbiza/iipani ezisisiseko, izinto zesilivere, kunye nezixhobo zokupheka ezifunekayo ekuphekeni ngaphakathi okanye ukosiwa ngaphandle kwi-Weber charcoal grill yethu, igrill grill, okanye i-fire pit grate. Kubonelelwe ngamalahle aluncedo. Okokugqibela, kumenzi wekofu oqhelekileyo, sibonelela ngekofu encomekayo ngeswekile kunye neekhrimu ukuze uyisebenzise.
Igumbi lokuhlala linee-recliners ezimbini, i-loveseat, i-stool bar ezintathu, kunye ne-TV yesikrini esisicaba esinebar yesandi. Iitshaneli zeTV eziSisiseko kunye nesidlali seDVD esisemgangathweni esineebhanyabhanya ezahlukeneyo ziyanikezelwa. Ngamanye amaxesha sisebenzisa i-800 ibhloko yeziteshi zomculo ongasemva ngelixa sishiya iingcango zangaphambili zivulekele kwindawo engaphandle. Kukwakho unomathotholo ngaphezulu kwefriji apho i-iPhone inokuqhagamshelwa kuyo ukuze udlale umculo wakho. Isitulo esiphakamileyo somntwana sikumgangatho ophezulu emva kwenye yeebhedi ukuba kuyimfuneko.
Ekugqibeleni, igumbi lokuhlambela likwinqanaba elisezantsi le-cabin. Ishawari inentloko yokutshiza eqhelekileyo. Igumbi lokuhlambela lineetawuli ezitsha, iimpahla zokuhlambela, isomisi seenwele, kunye nebhodi yoku-ayina ukuze uyisebenzise ngeshampu encomekayo kunye nesepha yeshawa.
4.98 · Izimvo eziyi-185
Ndiza kukunika ikhowudi enamanani ama-4 yomnyango wangaphambili kunye nenye yesango ngaphambi kokuba ufike. Ndihlaziya ikhowudi yondwendwe ngalunye ukuze kuphela ungene. Asiyi kucwangcisa ukuba khona ngaphandle kokuba ungathanda ukuba sibe.
Ndiza kukunika ikhowudi enamanani ama-4 yomnyango wangaphambili kunye nenye yesango ngaphambi kokuba ufike. Ndihlaziya ikhowudi yondwendwe ngalunye ukuze kuphela ungene. Asiyi kucw…